Create Awesome Animated Videos for your business | Myanmar Online
Create Awesome Animated Videos for your business
Everything you need to learn to create animations
Learn from Master Powtoonist who has made 600+ animated videos for EduGate, Myanmar Online School and Workmal.com.
သင်တန်းကြေး- 68,000 Kyats
ဘဏ်များမှ တဆင့် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းလိုသူများအတွက် အောက်ပါ ဘဏ်များမှာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ‌Wave Money မှ တဆင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်နည်းနှင့် မဆို ပေးသွင်းပြီးပါက ဖုန်း ၀၉၉ ၆၅၄၀ ၁၂၂ ၊ ၀၉ ၂၆၃ ၂၈၁ ၉၈၉ တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဘဏ်ချလန်(သို့မဟုတ်) ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား တစုံတရာကို Viber Phone No. 099 6540 1222 သို့ပေးပို့ပေးကြစေလိုပါတယ်။ https://www.facebook.com/myanmarelearningschool/ မှာလည်း ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။
Account Holder Name: Aung Myint Myat
Account No. 3571 0830 3925 8578
Account No. :9993 0713 9002 31601
Account No. : 9503 1100 0010 4844
Account No. : 0100 2010 1002 9681
သင်တန်းကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် တက်လိုသူများကတော့
No.21/23, 6th Floor(B), U Tun Lin Chan Street, Hledan, Kamayut Tsp ( Between One Stop Mart & ABC 24hrs Store )
Phone: 099 6540 1222, 09263 281 989 မှာ လာရောက်တက်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုတွေက အချက်အလက်တွေ လဲလှယ်ဆက်သွယ်ရာမှာ အသုံးတည့်တဲ့ ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ပညာရှင်တွေကတော့ 2021 ရောက်ရင် 82% သော Internet traffic ဟာ ဗီဒီယိုတွေကြောင့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေနဲ့ သင်ယူသူတွေက စာအရှည်ကြီးတွေ၊ ပျင်းဖို့ကောင်းတဲ့ presentation တွေထက် မြန်ဆန်ပြီး အချက်အလက်ပြည့်စုံတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကိုသာ ရှာဖွေနေကြတာပါ။ ဗီဒီယိုတွေက သင်ထောက်ကူပစ္စည်းကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင် နားလည်ရလွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် animated video တစ်ခုကို ဖန်တီးရတာက ခက်ခဲပြီး ငွေကုန်ကြေးကျကလဲ များပါတယ်။
သို့ပေမယ့် Powtoon လို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့ tool တွေရှိနေပြီဆိုတော့ ခေါင်းခဲစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ သင်ယူရမှာကတော့ -
Powtoon ကိုအသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူ သေသပ်လှပသော ကာတွန်းဗီဒီယိုတစ်ခု ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ၊
ရှုပ်ထွေးတဲ့ အယူအဆသဘောတရားတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ရုပ်ပုံတွေနဲ့ အာရုံဖမ်းစားနိုင်ပြီး မျက်မြင်ပုံပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ၊
စာသင်ခန်းတွင်း presentation ထက်ပိုပြီး အာရုံဖမ်းစားနိုင်မယ့် content ကောင်းတွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ၊
Script template ကိုအသုံးပြုပြီး လူအများအာရုံစိုက်လာအောင် ဘယ်လို script ရေးမလဲ၊
မိမိရဲ့ ဗီဒီယိုကို သူမတူအောင်ဖန်တီးနိုင်မယ့် အသုံးဝင်လှတဲ့ Powtoon Hacks (၃) ခု တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Course အားလေ့လာသင့်သူများ -
Solopreneurs/Small Business Owners
Beginner-Level Video Animators
Anyone who wants to make animated videos
First Lecture (4:52)
Hi, I’m Ko Andrew, your instructor for this course.
Five years ago, I am always willing to create animation videos like you. For my training school, my business and organizations, I can't afford to usealot of money for promotion videos to grow my business.
Fortunately, I foundaway how to create the animations without needing any art background and withinafew minutes.
© Myanmar Online School 2022